भजनसंग्रह 52 ERV-NE - प्रमुख - Bible Gateway
भजनसंग्रह 51भजनसंग्रह 53
भजनसंग्रह 52 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
प्रमुख संगीतकारलाई: दाऊदको “मस्किल” भन्ने भजन।जब एदोमी दोयेग शाऊल कहाँ गए र उनलाई भने, “दाऊद अहिमेलेको घरमा छ”।
52 हे वीर मानिस, किन तिमी आफ्नो अधर्म कामहरूमा घमण्ड गर्दछौं?
तिमी परमेश्वरको नजरमा अपमानित मानिस हौ।
2 तिमीले सधैँ मूर्ख योजनाहरू तयार पाछौं अनि तिम्रो जिब्रो धारिलो छुरा जस्तो डर लाग्दो छ।
तिमीले सधैँ झूटो बोल्छौ अनि मानिसहरूलाई ठग्छौ।
3 तिमीले असलभन्दा दुष्ट्याँई नै मन पराउँछौ।
तिमी सत्य बोल्नु भन्दा झूटो बोल्नु नै मन पराउँछौ।
4 तिमी र तिम्रो झूटो बोल्ने जिब्रोले मानिसहरूलाई कष्ट दिन मन पराँउछन्।
5 यसैले परमेश्वरले तिमीहरूलाई सदा-सर्वदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ।
उहाँले तिमीहरूलाई पक्रनु हुनेछ अनि तिम्रो घरबाट [a] धकेल्दै तान्नु हुनेछ,
जसरी मानिसहरूले उद्भिद्लाई जमीनबाट जरैसँग तानेर निकाल्दछ।
6 धर्मात्माहरूले यो देख्नेछन् र परमेश्वरको डर मान्ने छन्।
परमेश्वरको आदर गर्नेछन्।
तिनीहरू तिमीमाथि हाँस्ने छन् र भन्नेछन्।
7 “हेर, परमेश्वरमाथि जो भर पर्दैन त्यस मानिसको गति कस्तो हुन्छ।
उसले सोच्यो कि सम्पत्ति र झूटो कुराहरूले उसलाई रक्षा गर्नेछ।”
8 तर म परमेश्वरको मन्दिरमा उम्रिने हरियो धुपीको रूख जस्तै हुँ।
म सदा-सर्वदा परमेश्वरको स्नेहपूर्ण करूणामा भरोसा गर्नेछु।
9 हे परमेश्वर, जुन कामहरू तपाईंले गर्नुभयो म ती कुराहरूको सदासर्वदा स्तुति गर्नेछु।
म भक्तजनहरूका समक्ष तपाईंको नाउँ लिनेछु किनभने यो अति राम्रो छ!
भजनसंग्रह 52:5 घरबाट यहाँ घरको अर्थ “शरीर” हो। यो साहित्यिक भनाई हो।अर्थत परमप्रभुले तिमीलाई यो संसारबाट सदाकोलागि नष्ट गर्नु हुनेछ।